$4 Indian Smartphones 'Will Ship this Week' - သတင်း Rule
$4 အိန္ဒိယစမတ်ဖုန်း 'ဤအပတ်ပို့ဆောင်ထားမည်’
ultra-စျေးပေါအသံမြည်ခေါင်းလောင်းလွတ်မြောက်ရေး 251 ယခင်ကလိမ်လည်မှုဖြစ်ထင် Android ဖုန်း၏အသုတ်ထဲမှာသို့ပို့ဆောင်ထားမည် 200,000 - ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီဟန်းဆက်အပေါ်ဆုံးရှုံးမှုစေမည်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “$4 အိန္ဒိယစမတ်ဖုန်း 'ဤရက်သတ္တပတ်သို့ပို့ဆောင်ထားမည်' '” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 27 ဇွန်လအပေါ်များအတွက် 2016 10.53 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ $4 အချို့သောအတွေးသတင်းများအရရုပ်လုံးပေါ်လာဘယ်တော့မှစေခြင်းငှါ, အိန္ဒိယဖုန်းကိုတည်ရှိပါဘူး, ဒါပေမယ့်ထုတ်လုပ်ပြီး startup တစျဦးစီအပေါ်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းအောင်သာသောကြောင့်,.
လက်စွပ်ခေါင်းလောင်းလွတ်မြောက်ရေး 251, ကနဦး£5တစ်ခုစျေးနှုန်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာ, ပုံများအတွက်ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက်ဖုန်း preordered သောသူဖောက်သည်ယခုအပတ်တင်ပို့ဖို့သတ်မှတ် - ($3.70 သို့မဟုတ်£ 2,77). ကုမ္ပဏီရဲ့မူလကကတိပြုတ - - ကြောင်းစျေးနှုန်းမှာအိန္ဒိယ startup ရူပီးဆုံးရှုံးသည် 150 ($2.2 သို့မဟုတ်£ 1.65) အသီးအသီးစမတ်ဖုန်း.
အသံမြည်ခေါင်းလောင်းတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်ချုပ် Mohit Goel အိန္ဒိယ Express သို့ပြောကြားခဲ့သည်: "ကျနော်တို့ဆုံးရှုံးမှုရှိသည်လိမ့်မယ်, but I am happy that the dream of connecting rural and poor Indians as part of the Digital India and Make in India initiatives has been fulfilled with Freedom 251.”
The 3G Android 5.1 smartphone hasa4in screen, 8--megapixel အနောက်ကင်မရာ, 3.2-megapixel selfie camera,a1.3GHz processor, 1GB of RAM and 8GB of storage, ပိုပြီးဖြည့်စွက်အဘို့အကာ microSD card slot ပါနှင့်အတူ.
တစ်ဦးကအစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ရေးစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နှင့်အတူအခွန်နှင့်စက်ပစ္စည်းအတွက်လက်မှတ်၏မရှိခြင်းကျော်ကုမ္ပဏီ၏ရုံးခွဲများတစ်ဝင်ရောက်စီးနင်းမှဦးဆောင်. အသံမြည်ခေါင်းလောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့သည် cheat စွပ်စွဲ နှင့်ကျော်တရားစွဲမှုနှင့်အတူကိုခြိမ်းခြောက် Adcom ၏ rebranding စမတ်ဖုန်းများ.
အသံမြည်ဘဲလ်အပေါ်ဖောက်သည်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင် Android စမတ်ဖုန်းတင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်သင့် 30 စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းဇွန်လ, ဒါဟာအတော်လေးတစ်အောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်, တစ်ဦး startup ၎င်း၏စီစဉ်ထားတင်ပို့အချိန်ဇယားမှာ£ 330,000 တစ်လဆုံးရှုံးရေရှည်တည်တံ့နိုင်ရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါဖြစ်နေဆဲပေမယ့်.
Motorola ကစူပါစျေးပေါရူပီးနှင့်အတူအိန္ဒိယဝယ်လက်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည် 6,999 Moto E ကို
အိန္ဒိယတွင်ဖုန်းများရောင်းချခြင်းမှပိတ်ပင်ခဲ့ '' တရုတ်နိုင်ငံဟာ Apple '' Xiaomi က
21869	5 Android မှာ, အပိုဒ်, အိန္ဒိယ, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, တောင်ပိုင်းနှင့်ဗဟိုအာရှ, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← ဘို့စ် QC35 ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း HP က Spectre Laptop ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [VIDEO] →